Soavaly kilalao, miresaka momba ireo maodely sarobidy indrindra izahay | Soavaly Noti
Jenny monge | | ny hafa
Ireo soavaly kilalao dia efa, nandritra ny taona maro, ny iray amin'ireo kilalao kilasika. Betsaka ny trano manana iray ho an'ny kely indrindra amin'ny trano.
Mbola miteny bebe kokoa aho olon-dehibe maro no misafidy ny hametraka soavaly mihifikifi-damba amin'ny zorony haingon-trano haingon-trano. Amin'izany dia mitondra hafanana amin'ny efitrano iray izy ireo noho ny hazo sy ny endrik'ireo soavaly.
Hitantsika ve hoe iza amin'ireo maodely sarobidy indrindra amin'ireto kilalao ireto izay niara-nifandimby?
Miatrika kilalao nentin-drazana isika izay nivoatra rehefa nandeha ny fotoana. Na izany aza, amin'ny ankapobeny, dia mbola kilalao mihifikifi na mihodina ho an'ny ankizy mitaingina azy io. Ankafizin'ny ankizy kely ny maka sary an-tsaina hazakaza-tsoavaly, manenjika na mandany fotoana fohy miala sasatra 'mandeha an-tongotra' fotsiny.
Ho fanampin'izay, amin'ity karazana ity soavaly mihozongozona na misy kodiarana, manana ny kilalao isika soavaly izay vita amin'ny a lohan-tsoavaly soavaly na hazo amin'ny faran'ny hazo. Ity tapa-kazo ity no apetraky ny ankizy eo anelanelan'ny tongony mba hitaingenany tontolo maro mahafinaritra izay miara-miaina ao an-tsainy. Ny tombony amin'ity kilalao ity dia ny ankizy afaka mitondra azy na aiza na aiza milalao. Ny tsofa fitaratra no ho ferana indrindra amin'io lafiny io.
Andao hojerentsika izao izay maodely soavaly tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Mba hanaovana an'ity lisitra ity dia nifidy ny naoty nomen'ny mpampiasa Amazon izahay.
1 Ireo maodely ambony naoty androany
2 Soavaly hazo
2.1 Orinasa tongotra kely Seesaw
2.1.1 Pintoy 60.09535 - soavaly mihozongozona hazo
2.2 Soavaly hazo sy lamba (karazana entana)
2.2.1 Knorrtoys 40502 Sugar - Soavaly mihozongozona
2.2.2 Famosa Softies Milomano mitaingina kodiarana sy feo 760013062
2.3 Soavaly an-tongotra
2.3.1 Knorr 40100 Hip Hop Toy ny soavaly misy feo
2.4 Soavaly plastika
2.4.1 Soavaly Clementoni Disney Rocking Horse
Ireo maodely ambony naoty androany
Rehefa mifidy kilalao lafin-javatra maro no tsy maintsy raisina, ny taonan'ny zaza no lehibe amin'izy ireo. Na raha haingon-trano izay misy soavaly hazo voaravaka loko sy verinia na tsia arakaraka ny tsiron'ny tsirairay.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ireo soavaly mitafy volo roa ho an'ny ankizy kely, eny fa na dia soavaly plastika sy hazo aza.
Ny lisitra dia tsy baikoina amin'ny tsara indrindra ka hatramin'ny isa ratsy indrindra, fa fanangonana tsy misy filaminana.
Eto dia ho hitantsika ireo maodely mahazatra indrindra amin'ity kilalao ity ary mbola novolavolaina ankehitriny. Ireo dia tonga lafatra mba hatao haingon-trano ary koa tonga lafatra ho an'ny ankizy.
Orinasa tongotra kely Seesaw
Miatrika maodely iray amin'ny kilasika indrindra izahay, amin'ny hazo voaravaka loko sy verinia. Ny tombony an'ity rocker ity dia ny fananany seza miaraka amina backrest izay manakana ny zaza tsy hianjera. Ny endrik'ilay skate amin'ny tsofa dia tena tsara ho an'ny olon-dehibe afaka mahay mandanjalanja ilay zaza amin'ny tongony.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ity kilalao ity ianao dia afaka mahita azy eto:orinasa kely tongotra Seesaw Horse.
Pintoy 60.09535 - soavaly mihozongozona hazo
Eo alohan'ny soavaly mitaingina seza miaro amin'ny fianjerana indray isika. Ary koa, amin'ity tranga ity, amin'ny sisin'ilay rocker, Miorina amin'ny fijanonana izay manome fitoniana.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ity kilalao ity ianao dia afaka mahita azy eto: Pintoy 60.09535 - soavaly mihozongozona hazo
Soavaly hazo sy lamba (karazana entana)
Ireo maodely ireo angamba dia iray amin'ireo voafidy indrindra ho an'ny ankizy kely kokoa. Izany dia vokatry ny Ny padding toy ny plush dia miaro tsara kokoa amin'ny mety ho fipoahana afaka manome ny tenany ny kely. Na izany aza, araka ny hitantsika teo aloha, ireo hazo misy seza sy backrest dia mety ho safidy tsara ho an'ny fiarovana ireo zanatsika. Na izany na tsy izany, Soso-kevitra ny hilalao ireo kilalao ireo hatrany eo ambany fanaraha-mason'ny olon-dehibe.
Knorrtoys 40502 Sugar - Soavaly mihozongozona
Raha te hahalala bebe kokoa momba ity kilalao ity ianao dia afaka mahita azy eto: Knorrtoys 40502 Sugar - Soavaly mihozongozona
Famosa Softies Milomano mitaingina kodiarana sy feo 760013062
Ity soavaly ity, ankoatry ny fanolorana ilay rocker padded ho plush amin'ny endrika koboy indrindra, dia misy feo ihany koa.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ity kilalao ity ianao dia afaka mahita azy eto: Softies malaza mihozongozona miaraka amina kodiarana sy feo
Araka ny efa noresahintsika tany am-piandohana, ity no kilalao mety indrindra ho an'ireo ankizy tia milalao eny an-dalambe na te-hitondra ny kilalaon'izy ireo.
Knorr 40100 Hip Hop Toy ny soavaly misy feo
Ity modely ity dia manana feon'ny whinnying sy trotting izay toa manaitaitra ny maro amin'ireo kely. Mamarana ilay tehina amin'ny kodiarana ihany koa izy io mba hahatonga azy ho mora ampiasaina kokoa.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ity kilalao ity ianao dia afaka mahita azy eto: Knorr 40100 Hip Hop Toy ny soavaly misy feo
Ireo angamba no kely indrindra malaza amin'ny malaza. Toa izany, ary miombon-kevitra amin'ny hevitro aho fa ireo safidy etsy ambony dia mahafinaritra indrindra. Na izany aza, mazàna dia manolotra zavatra hafa izay mahatonga azy ireo kilalao tsara.
Soavaly Clementoni Disney Rocking Horse
Ny tombony an'ity soavaly ity dia ankoatry ny maha soavaly sy soavaly mihozongozona, Ivon-hetsika io. Mitenena amin'ny teny espaniola, manampy amin'ny fianarana anglisy, litera, isa. Noho izany, manarona filokana filokana bebe kokoa izy io. Izany dia Mety ho an'ny ankizy kely.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ity kilalao ity ianao dia afaka mahita azy eto: Soavaly Clementoni Disney Rocking Horse
Manantena aho fa tianao ity lahatsoratra ity toy ny nanoratako azy ary mankafy soavaly kilalao ianao, na ho an'ny zaza na ho anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Soavaly kilalao, miresaka momba ireo maodely sarobidy indrindra izahay